Kaviri Row Cylindrical Roller Kubereka
Yevashandi Zuva Rezororo Cherechedzo
Vadiwa vese vatengi vanokosheswa: Tichava muzororo kubva Chivabvu 1 kusvika 5, panogona kuve nekumwe kunonoka kupindura panguva ino nekuda kwekuganhurira mukana wekuwana email, Tine urombo nekusazvibata kunokonzerwa nehoridhe. Ndapota taura nesu kuburikidza wechat kana whatsapp pasina kana kuzeza kana uine chero chaunoda, ini ...
Chinese State Taxation Administration yakaburitsa chiziviso mazuva mashoma apfuura, pamwe mutengo wezvinhu zvisirizvo uchakwira zvakare !!
Iyo State Administration yeMitero yeChina nguva pfupi yadarika yakaburitsa chiziviso pamusoro pekudzimwa kwemitero yekunze kwemitero yezvimwe zvigadzirwa zvesimbi. Iyi nhanho inogona kukonzera kuti zvigadzirwa zvisimukire zvakare. Vatengi vane zvirongwa zvekutenga zvazvino vanokumbirwa kuti vagadzirire mangwanani. Zvichida mutengo weiyo mbishi ma ...
Rolling Kubereka Sarudzo - Tarisa pane iyo Yakakura Mufananidzo
Kana uchitora hupenyu hwese kutenderera uchitakura mutengo wekutenga wega muakaunzi, vashandisi vekupedzisira vanogona kusevha mari nekufunga pamusoro pekushandiswa kwemhando yepamusoro-giredhi kutenderera. Kutenderera mabheyari kwakakosha zvikamu mukutenderera chirimwa, michina nemidziyo, kusanganisira mashini maturusi, otomatiki kubata syst ...
Izvo zvese zvinotakura pamusoro pekukuvara zvinonetsa? Kurwisa Ngura paChikamu Chekugadzira
Kusvikira pamakumi mana muzana echirimwa chemuriwo chinogona kuenda kunoraswa nekuda kwekushongedzwa kwezvimwe zvitoro. Kunyangwe iyo wonky miriwo inogona kunge isiri iyo inoratidzika kutaridzika, iine hutano hwakaenzana hwehukama seyakaenzana yakakwana. Kubereka pamusoro kukuvara kunogona kutora zhinji fo ...
Nzira dzekuwedzera Kubereka Hupenyu Hupenyu Hwekumhanya Kwakanyanya Kunyorera
Kupfeka uye kubvarura zvinowanzoitika nekufamba kwenguva kune chero chinhu chinotakura. Kune zvikamu zvinoshandiswa mukumhanyisa-kumhanyisa kunyorera, zvakashata mhedzisiro yekusakara uye kubvarura zvinogona kuve nyaya hombe nekukurumidza. Yekumhanyisa-kumhanya kunyorera kunogadzira iwo maviri matambudziko kune ako akatakura's hutano: kuwedzera kupisa uye kukakavara. Pasina yakakodzera p ...
Nzira yekusarudza iyo chaiyo yekutakura?
Performance mashandiro Mienzaniso Inoshanda kunyatso giredhi Muviri wekumisikidza unodikanwa kuve neakakwira runout kunyatsoteerera Audio nemavhidhiyo muchina chokurukisa (vhidhiyo rekodhi, tepi rekodhi) Radar, parabolic antenna shaft Machine chishandiso chokurukisa Magetsi komputa, diski chokurukisa Aluminium foi ...
Kutsigira kupisa uye kumanikidza - kutakura dhizaini yekuvimbika munzvimbo dzakanyanya.
Kuwedzera kudiwa kwekuvandudza kuvimbika pamabhizimusi zvinoreva kuti mainjiniya anofanirwa kufunga nezvese zvinhu zvemidziyo yavo. Kutakura masisitimu zvikamu zvakakosha mumushini uye kukundikana kwavo kunogona kuve nenjodzi uye nemhedzisiro. Iyo dhizaini dhizaini ine maitiro makuru pakuvimbika, espe ...
Deredza Zvinosvibisa Uye Kuvandudza Kutakura Hupenyu
Mafuta akasvibisa ndechimwe chezvinhu zvinotungamira mukukuvara uye kazhinji chinhu chakakura mukuguma kwenguva isati yakwana yekutakura hupenyu. Kana kubereka kuchishanda munzvimbo yakachena, inofanira kungokundikana kubva pakupedzisira, kuneta kwepanyama asi kana sisitimu ikave yakasviba, inogona kuratidza ...
Nzira Yokuderedza Girisi Ropa
Girisi rinobuda ropa kana kupatsanurwa kwemafuta chirevo chinoshandiswa kureva girizi rakaburitsa mafuta panguva yekugara (yekuchengetedza) kana yakajairika mashandiro. Mumamiriro ezvinhu akaomarara, kubuda ropa kwemafuta kunoonekwa nekuvapo kwemadziva madiki emafuta, kunyanya kana girizi repasi risiri sandara kana husiku ...
6 ANOGARA ACHIBATA MAFOMU ECHISimbiso
A 、 ZZ - Guruva rinovhara zvisimbiso pamativi ese ekutakura Shandisa Nharaunda: Yakajairwa mota, guruva-chiratidzo chinoshanda nharaunda。 Chazvakanakira: Yakaderera mutengo, Yakadzika yekutanga torque, uye yakanyanya tembiricha uye yakaderera tembiricha mamiriro ekushanda anogona kuve epasirese. Kukanganisa: Iyo yekuvhara musiyano yakakura (kazhinji abo ...
Zvaunofanira Kuziva Nezve Wheel Bearings
Sei mabheji akatakurwa akakosha kudaro? Mhinduro yakapusa ndeyekuti ivo vanonyatso chengeta mavhiri akasungirirwa pamotokari yako. Kana iwe ukafunga imwe sarudzo, zvinongoerekana zvava pachena kuti isu tese tinofanira kuziva zvakawanda pamusoro peizvi zvinowanzo kufuratirwa asi zvakakosha zvikamu mumotokari dzedu; sei ...
9 matipi eDziviriro Yekuchengetedza yako vhiri hubhubhu mabheyaringi
Kudzivirira kuchengetedza ndiyo kiyi yekukwirisa mashandiro uye kugadzikana kwechero huni inobereka. Heino runyorwa rwemazano ekuchengetedza kweako mareferenzi: 1.Kana uchitsiva yako Wheel Kubereka & Hub Assembly kuongorora uye kuchenesa nzvimbo yekumisikidza nzvimbo kuti uve nechokwadi chekumisikidza 2.Inspect lug n ...